Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh oo kulan la qaatay Ururada Bulshada Rayidka[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiirka Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh oo kulan la qaatay Ururada Bulshada Rayidka[Sawirro]
MUQDISHO – Kulan u dhaxeeyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Ururada Bulshada Rayidka ee kala ah SOSCENSA iyo PUNSAA ayaa muqdisho ka dhacay, kulanka ayaa ku saabsanaa warbixin ay Bulshada Rayidka ka dhageeysanayeen Wasaaradda oo ku aadaneeyd wadashaqeynta Wasaaradda iyo Guddiga La-socodka dib-u-eegista Dastuurka ee labada Aqal.
Ururada Bulshada Rayidka ayaa ugu horeeyn waxa ay la soo kulmeen Guddiga Labada Aqal iyaga oo ka soo dhageeystay warbixin, kadibna waxa ay kulan la qaateen Wasaaradda si arinta taagan ay Bulshada Rayidka door wanaagsan uga qaataan.
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa aad u soo dhaweeyay sida ay Bulshada Rayidka ay isku xilqaameen isaga oo sheegay in ay tahay astaan muujineysa sida dalka Soomaaliya u leeyahay mustaqbal wanaagsan.
“Inaga iyo Bulshada Rayidka sanad ka hor waxa aan ku midoownay ka shaqeeynta danta dalka iyo dadka, runtii marqaati ayaad ka tihiin sida ay marwalba nooga go’antahay in aan wadashqeeynta ilaalinno; waa bilow wanaagsan in Bulshada Rayidka ay isku xilqaamaan xalinta arin walba oo taagan waana ififaalo waanaagsan oo muujineysa mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya ay leedahay” ayuu yiri Wasiirka.
Dhankooda Gudoomiyaha SOSCENSA Diini Maxamed Diini iyo Gudoomiyaha PUNSAA Feysal Axmed Warsame ayaa waxa ay Wasaaradda uga mahadceliyeen sidii wanaagsaneyd ee Wasaaradda sanadkii la soo dhaafay ula shaqeeysay Bulshada Rayidka, waxa ayna hoosta ka xariiqeen in Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ay tahay Wasaaradda ugu wanaagsan hay’adaha dawladda ee wadashaqeeyn aad u wanaagsan la leh Ururada Bulshada Rayidka. Labada Gudoomiye waxa ay sheegeen in arinta ka dhex taagan Wasaaradda iyo Gudigga Baarlamaanka ay door wanaagsan ka ciyaari doonaan sidii loo xalin lahaa.
Ugu dambayn, Wasiir Cabdi Xoosh ayaa soo dhaweeyay wax walba oo xal ah si wadashaqeynta iyo iskuduubnida loo xoojiyo oo hawsha Qaran loogu qabto si hufnaan leh oo waqtiyeysan.